लज्जावतीः साइमनको आगमन — OnlineDabali
अनियन्त्रित मन सम्हाल्नु भनेको बौलाहा घोंडाको लगाम पकड्नु भन्दा गाह्रो हुँदो रहेछ । त्यही परिवेश भित्र अति संवेदनशील मानिने मनको अव्यवस्थित लगाम सम्हाल्न हम्मे परेको छ मलाई । यी गमलामा पनि फुलाउनु छ मैले लज्जावतीलाई र पाखा पखेरीमा पनि तर म विगतमा जसरी लज्जावतीसँग खेल्दिनँ । किनकी मलाई भुलेर पनि फेरि उनको अस्तित्व नामेट गर्नु छैन । जहाँ म जीवनको अस्तित्व पाउँछु र गुमाउँछु । सायद पाउनु र गुमाउनु जीवनको रीत हुन सक्छ । मान्छे नचाहेरै पनि जीवन र यर्थाथबाट कायापलट हुनपुग्छ ।
हुन त जीवन एउटा मनोवेगहरूको संङग्रहभन्दा बढी अरु नहुन सक्छ । आवेगले त मान्छेलाई मनोरागी मात्रै बनाउँछ । त्यसो त जीवन आवेगहरूको पर्खाइपनि त होइन । तर पनि मान्छे असरल्ल पोखिन्छ आवेगका पहाडहरूबाट र विलाउँछ शून्यतामा । सधैं सधैंका लागि । अखिर जीवन जीवन नै हो शून्यता शून्यता नै । भन्छन् जीवन फूल हो । यस्लाई फुलाउन जान्नुपर्छ तर यसो भन्ने हृदयहरू पनि आज लज्जावती झार जस्तै ल¥याक लुरुक्क परेका छन् । जस्ले कालान्तरमा फूल त फुलाउँछ नै तर, आफै भने सधैं सरम मानेझैं कायापलटको बाटो समातेर जीवनको अस्तित्व नामेट गर्न पुग्छन्। म त्यही निस्सारपूर्ण र विसंगतीपूर्ण जीन्दगीलाई विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने एउटा हृदय । तर खैं…
‘वाल’ मा झुण्डाइएको विभिन्न अवस्थाका लज्जावतीका बोट र फूलहरूको तस्विर देखाउँदै भनें मैले,– ‘यो अस्तित्ववादी झार हो । सायद नित्सेले ईश्वरको मृत्युको घोषणा गरेपछि यो धर्तिमा आएको हुनसक्छ वा वीज ब्लेज पास्कल, हुरसेल र डिल्थीहरूले लज्जावतीको वीज छरेर गएको पनि हुनसक्छ ।
कसैले ढक्ढक्याएको ढोकाको आवाजले मेरों एकाग्रताको छालमा ढुङ्गा हिर्कायो । म छताछुल्ल तरङ्गिएको छालमा छरपस्टिएर लम्पट पर्न बाध्य भएँ । जहाँ झ्यालका सिसाहरू फुटेर छरपस्ट थिए ।
अपरिचित बोल्यो, ‘नमस्कार !’
मैले भनें– ‘यहाँलाई चिन्न सकिनँ’ । आँखाको चस्मा निकालेँ र पुछ्दै भनें, ‘के कति कामले पाउ कष्ट गर्नुभयो होला ?’
अपरिचित बोल्यो, ‘म साइमन’ । पुख्यौली नेपाल नै हो । तर अहिले अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्छु । काठमाडौंको लज्जावती बालगृहमा पुगेको थिएँ । चम्पा म्याडमले तपाइँको ठेगाना दिनुभयो र म यता डोरिएको हुँ ।
मैले शिष्टाचार दर्शाउँदै भनें, ‘भित्रै बसौं न ।’
कोठाभरि छरिएका गमलाका फूललाई छुँदै साइमन बोल्यो, यो कुन फूलको बोट हो क्षितीज जी, सबै गमलामा एउटै फूलका बोट देख्छु म । ल..ल यो त ओइलायो त, छुने वित्तिकै । कृत्रिम हो कि ? फरक फरक गमलामा फरक फरक फूलहरू हुनुपर्ने होइन र ! एक्लै बोलिरह्यो साइमन ।
‘माफ गर्नुहोला साइमन जी, अगाडिको सावधानी वोर्ड तपाइँले देख्नु नै भएन जस्तो लाग्यो । ‘डोन्ट टच इट’
मैले सावधानी वोर्ड देखाउँदै भनें, ‘यो लज्जावती फूल हो । भलै यस्लाई लज्जावती झारको रुपमा विश्लेषण पनि गरिन्छ । तर यसले सुन्दर फूल फुलाउँछ । तर कसैको हस्तक्षेप स्विकार्दैन । तपाइँको अमेरिकाको जस्तो कृत्रिमताले भरिएको छैन लज्जावती ‘इट्स रेल्ली नेचुरल’ किनकी, लज्जावती कृत्रिमताभित्रको सौन्दर्य स्विकार्दैन र कृत्रिमता भित्रको जीवनलाई पनि । सरी, क्षितीज जी, ‘इट्स इन्ट्रेस्टीङ प्लान्ट’ मेरो मनै हर्यो यसले । ‘साइमन बोल्यो ।’
साइमनले रुकस्याकबाट ल्यापटप व्याग निकाल्यो टि टेबलमा राख्दै बोल्यो,-‘मेरो मान्छे हरायो ।’ मलाई झनक्क रिस उठ्यो र भनिदिएँ – ‘त्यसो भए तपाइँ प्रहरी कहाँ जान सक्नुहुन्छ ? मैले तपाइँको हराएको मान्छेलाई यहाँ ‘किड्न्याप’ गरेर लुकाइराखेको छु र ?
‘वाल’ मा झुण्डाइएको विभिन्न अवस्थाका लज्जावतीका बोट र फूलहरूको तस्विर देखाउँदै भनें मैले,– ‘यो अस्तित्ववादी झार हो । सायद नित्सेले ईश्वरको मृत्युको घोषणा गरेपछि यो धर्तिमा आएको हुनसक्छ वा वीज ब्लेज पास्कल, हुरसेल र डिल्थीहरूले लज्जावतीको वीज छरेर गएको पनि हुनसक्छ । नत्र किन यो अरुको अस्तित्व स्विकार्दैन हँ ? फेरि लज्जावतीलाई यहाँ कसैले पूजा थालीमा राखेर मन्दिरमा विराजमान मूर्तिको शिरमा सिउँरिदिएको पनि त पाउँदिनँ म । त्यसैले मलाई त लाग्छ लज्जावतीलाई कतै मार्टिन हेड्गर पो ले नेपालमा ल्याएर पाखा पखेरीमा छरिदियो र यो अँकुरायो कि ।
सायद म यतिखेर आवेगमा थिएँ । साइमन मेरो अवेगलाई बाँध बाँध्न तम्सिएझैं गरि बोल्यो,– ‘क्षितीज जी, त्यो त जु.डी. गेटिएर, उनामोनो र बी फोन्डेनहरूलाई नै सोध्नु पर्ला ।
तर, तपाइँले त यस्लाई घरमै ल्याएर सजाउनु भएको छ जस्लाई मानिसहरू मन्दिरमा लगेर भगवानलाई चढाउन डर मान्छन् ।
मैले साइमनसँग लज्जावती बारे किन बहस गर्ने ? ह्या… छोडिदेऊ ती सब कुरा । मनमनै बेकारिएँ र भनें,– ‘साइमन जी मलाई भेट्न आउनुको कारण खोज्दैछु तपाइँसँग । ’
साइमन बोल्यो, ‘माफ गर्नुहोला क्षितिज जी, मैले सुनेको थिएँ मेरो हराएको मान्छे तपाइँ राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ । त्यही थाहा पाएर तपाइँकहाँ बुझ्न मात्रै आएको हुँ । तपाईको मन दुखाउन आएको होइन ।’ मेरो विक्षिप्त मनलाई सान्त्वनाको मलम लगाएझैं गरि बोल्यो साइमन ।
ल्यापटप खुल्यो । उसले फोटो तर्फ देखाउँदै भन्यो,-‘लुँजला हो उनको नाम, मेरो विजनेस पार्टनर । त्यो भन्दा बढी उनी मेरो प्रेमिका । म साह्रै माया गर्थें उनलाई । तर उनी भने नेपालमै मेरो ‘व्याय फ्रेण्ड’ छ भन्थिन् र मेरो प्रर्पोजलाई रिजेक्ट गर्थिन् । मलाई उनको क्रियाकलाप ठट्टै मात्र लाग्थ्यो । धेरै समय बित्यो तर उनी अमेरिका फर्किनन् क्षितिज जी । केही समयको लागि नेपाल पुगेर आउँछु भनेर आएकी उनी फर्किनन् । आज म उनैलाई खोज्दै तपाइँको घरसम्म आइपुगेको छु । म अवाक् बनेर सुनिरहें मात्र साइमन बोल्दै गयो ।
‘म नेपाल आउँदा हरेकपटक कुनै न कुनै संस्थालाई सहयोग गरेर फर्कने गर्छु । यो पटक पनि लुँजलालाई नभेटेपछि निरास भएर अमेरिका फर्कनु अघि एक होटलवालाको सहयोगमा लज्जावती बालगृहमा पुगेको थिएँ । बालगृहका संचालक चम्पाले तपाइँसँग एकपटक भेट्न भनेपछि म यहाँ आइपुगेको हुँ । मलाई माफ गर्नु होला, क्षितिज जी ।
मैले भनें,– ‘अँ अरु के भनिन् चम्पाले ?’
साइमन बोल्यो,– ‘लुँजलाको बारे क्षितिज सरलाई केही थाहा हुन सक्छ भन्दै तपाइँको एड्रेस र लोकेसन दिइन् र म यहाँ आएँ ।’
मैले सुस्केरा हाल्दै भनें,– ‘यु आर लेट’
साइमन लज्जावती झार जस्तै खुम्चियो र सोध्यो,– के भयो क्षितिज जी ? लुँजलाको विहे भयो ?’ मलाई लुँजलाबारे साइमनलाई अब मुखले केही बताउनु थिएन र भनें,– ‘यो सब जान्न तिमीलाई अधिकार छ । लौ समाऊ यो पाण्डुलिपी यसमै पाउने छौं तिमीले लुँजलालाई ।’
शुक्रबार लाेकार्पण हुँदै गरेकाे उपन्यास लज्जावतीबाट साभार
द्वन्द्व,प्रकृति र प्रेमको त्रिकोणात्मक संगम ‘लज्जावती’
Posted in विचार, साहित्य | Leaveareply